Baaddimmee Lafa Dhagaaf Lubuun 100,000 - Caboowanci.com-Oromia
Explorer Everythings & Do what you looking for
General Idea News
Baaddimmee Lafa Dhagaaf Lubuun 100,000
October 10, 2017 October 10, 2017 Nadhani	0 Comments Ethiopia, OLF, OMN, Oromia
Kan Ta´eetu Yoo Du´ee Garuu Lubuun Oromoo Milliyyonaan Lakkaawwamuu Yoo Du´uu Moo Maal Ta´uu Akka Qabuu Moo Tilmaamuun nama hin dhibuu.
Walumaagalatti hojiin Mootummaa Ethiopia (TPLF) fi kaayyoon jara kanaa maal akka ta´ee hundii keenya jalaa bada jedhee hin yaauu. Akka carraa ta´ee Qabeenyii Oromoo samamee dhumuu dedeeti malee halkaniifii guyyaa otuu itti hin irra hin boqatiin saamaafii lafa irraa duguugaa turaniidha. Akkasumas moo barataa Oromoo, beekaa Oromo, qotee bulaa Oromo, Hayyuu Oromo, jaarsaaf jaartii uttuu hin jedhiin dargagoofii daa´iima otuu hin jedhiin , dhiiraafii dubara otuu hin jedhiin ajjeesaa, hidhaa, gara dabarsaa, biyyaa baassaa fi mana hidhaati guuraa fi fixaa turan ammas irra jiru.
Egaa asi irrati waan hedduu kaasuun barbaachisaadha.
1. Lafa dhagaa ta´ee fi duwwaa dhufuus hafus kan nama hin fayyaneefi Baaddimmeefi Shirooron jedhamuu akkasuma Zalanbassa lubuun kuma dhibbaa tokko (100,00) ol itti du´ee.
2. Oromoo kana moo ofii isaaniittin (TPLF) amma danda´an keessa ajjeesanii , hidhanii fi gara dabarsuudhaan amma dadhabanii dhiisuus waan hin dandeenyeef diina biraa Omishuudhaan lafa irraa ficcisiisaa jiru.
3. Gaafa Somaleen Liyyuu Poolisiin Oromia yeroo adda addaa weeraraa jirtuu Calisaniituma ilaala turan.
4. Gaafa Oromia ofi irraa qolachuu socho´aa ture akka Oromoon hin sochoonee doowwaa turan
5. Gargaarsaafii lola Somaleen Oromia irrati godhaa turtee Loltoonni federaala akka keessa jiran beekamaa ture.
6. Lola kana keessa Somaleen Moqadishoo illee irrati hirmaachaa ture.
7. Lola Kana keessa Shanan Somalee kan Jedhan hundaa lola kana akka deegaraa turaniidha.
8. Loala kana Jibuutiin illee Somalee kana akka deegaraa turteedhaa.
9. Ammas kun otuu kanaan jiruu mootummaa wayyaanee karaa Benishaangul Oromo dhihaa irrati lola baninsuudhaaf Meeshaa waraanaa Konkolaata Bottee tokko guutuu otuu ergaa jirtuu harka irra qabamee.
10. Afaar irraanis lolaa Oromia irrati kaasisuudhaaf tataafii meeqaaf meeqa hojachaa jirti…
11. Hayyoota Oromoo boruuf yaaduu danda´aan tilmaama ajjeechaa gochaa jira.
Kanaaf egaa Ummanni Oromoo hundii gochii Mootummaa Wayyaanee kana hubachuun SI DINNEE JIRRAA, DOWN DOWN WAYYAANEE JIECHAA jira.
Kana qofa mitti Wayyaaneen erga miila lamaan dhaabachuu jalqabidee kaasitee ilaalicha samuu jijiirachuu, barachuu, fi balidhisanii yaaduu isaan keessati horamee hin beekuu. Sababiin issa moo umama isaanii irraa kaassee, jireenya isaanii irraa kaasse, gudinna isaanii irraa kassee kan itti jiraachaa turan dhagaa keessati kan itti qabissa´aa turan dhagaa waan ta´eef amma fedheyyuu barataniis jijiirama fiduu hin dan´anii. Kan yaadanii meshaa waraanatiin ajjeesanii gara dabarsanii akkasumas hidhanii bituu barbaaduu. Amma kanaan booda itti milka´uu jechuun hin danda´amuu.
Qabxiin armaan olitii lafa ka´amee kaassuun barbachisaa hin ta´uu sababiin isaa moo: gochii wayyaneen Oromia dadhabisiisuuf gochaa jirtuu beekamaa waan ta´eef.
Garuu asi irrati kan bayyee nama gaddisiisuu gaafa Badimaaniifi Zalambassan sun weeraramitee jirti jedhanii lola kaasaa turan sana irrati kan irrati adda adurummaadhaan du´aa ture lammii Oromo ture.
Daangaa biyyatti eegisuu maqaa jedhuun lubuun namoota amma sanaa fi qabeenyii amma sanaa daaraa ta´ee ture.
Hardha moo Somaleen daanigaa Oromia cabistee Oromia weeraruu qofa mitti, dubartoota oromoo gudeeduudhaan, Qabeenyaa Oromo saamuudhaan, maneen barumisaa Oromoo gubuudhaa, hospitaala Oromoo gubuudhaan kana hundaa gaafa Oromo irrati raawwachaa turan sana Mootummaan Federaalaafi wayyanonni harka lafa jalaatiin somalitota diigaraa tura.
Si´ach hardhaas ta´ee borus Oromoon diina isaa addaan baafatee beekuu qaba. Ummata addaa, Afaan , Amantaa fi kkf wajjin qabinna jettanii diina nu irrati umurii hin dheerasiinaa. Namoonni wa´ee Somalee beekan ragaa bahuu ni dandeenya. Somaleen hardhas ta´ee boru Oromoo akka firaati ilaaltee hin beekituu. Oromoon moo ummata kanaa otuu gad xiqqatuu jala kaachuufi salphachuu hin qabu amma fedheeyyuu Amanitaa walfakkaata qabaataniyyuu. Isaan amanitaa wal fakkaata qabinna , addaa wal fakkaata qabinna mee haa kabajinnu jedhanii?
Otuu beekanii waan biraa hafee Kushii ta´uu qofaan kabaja Oromoo qabu ture. Somaleen Ummata oromoo taatuu dhiisiitii kan ofiifuu hin taaneedha. Da´imaa wagaa 7- 12 lubuu ibda itti qabisiisani ajjeesuu jechuun maal jechaadhaa? Kanaaf waan hin taate maqaa dhahanii wal fakkeessuun si´achii fudhatama hin qabu. Somalee mitti Oromon itti addaa tokko qabu fi Afaan tokko qabuyyuu seera issa egaa wal kabajuu qaba malee tokko gad xiqqeesse tokko ol kaassee jiraachuu hin danda´uu afaan tokko fi addaa tokko qabaateedhaaf.
Kanaafuu yeroo ammaa kana diinni Oromoo TPLF fi Somale bira darbee Oromoo dhumma keessayyuu haricca´ee bahee, beekamee, addaa bahee, kan Saba kana tokkoomissufii huminneesuu dhalachaa jira. Maqaa Oromootiin nagaduufii diina umurii dheeresuun afee jira. Oromoos yoo ta´ee diina si bira jiru ofi irrati ilaalii malee lammii kee issa waa hojjachaa jiru dadhabisiisuuf hirba hin dhabiin hin dhama´iin.
Share this: Qooddadhaa
← The West Should Not Waste any more time to avert the unfolding humanitarian tragedy in Oromia
Wayyaanee fi Ummata Sa´aati 24 Paaltokii Irra ta´uu →
Copyright © 2020 Caboowanci.com-Oromia. All rights reserved.